Fantatrao ve ny hevitra fampiroboroboana an-tserasera?
Manontany tena hoe ahoana no ahafahanao manapa-kevitra ny tetikasan-tserasera amin'ny sehatra manaraka? Ireto misy sasantsasany fampidiran-tserasera ho anao handinihanao.
Live Streaming Initiatives
Vaovao hivelomana mivantana? Tsy ilaina ny mampanahy - miaraka amin'ny Facebook sy Twitter manao fanatsaràna mivantana kokoa noho ny teo aloha, amin'izao fotoana izao no tena tokony handinihanao izany amin'ny marikao. Atombohy amin'ny fivorian'ny toriteny - slotocash bonus codes. Eritrereto ny hevitra momba ny votoaty tianao omenao. Ny sasany amin'izy ireo dia mety ahitana:
Q & A: Diniho ny fanontaniana sy valiny amin'ny fivoriana amin'ny manam-pahaizana momba ny indostria. Azonao atao ny mametraka fanontaniana avy amin'ny mpanjifanao mba hampitombo ny fifandraisana.
Mpandinika: Ampianaro ny mpampiasa ny fomba rehetra ahafahan'izy ireo mampihatra ny vokatrao. Azonao atao ihany koa ny mampiseho azy ireo ny fomba hampitomboana ny fampiasana azy ireo amin'ny serivisy manokana na ny vokatra omenao.
Ny fandraisana anjara mivantana mivantana dia tonga lafatra ny manakaiky kokoa ny mpanatrika. Rehefa manomana drafitra mivantana dia aza adino ny manambara mialoha fa tsy handiso fanantenana azy ny mpampiasa. Hevitra iray lehibe iray hafa koa ny fisamborana ireo mpampiasa ireo manoloana ny famoronana fampidiran-dresaka am-pilaminana mba ahafahan'izy ireo misongadina kokoa.
Amin'ny teny tsotra, ny votoatin'ny ephemera dia fitaovana izay tsy mifanaraka. Amin'ny ankapobeny dia tsy hita intsony ny votoatin'ny ephemera aorian'ny fotoana voatondro. Ho an'ny ankamaroan'ny orinasa mpandraharaha, mamorona votoaty izay hanjavona aorian'ny 24 ora dia mety ho toy ny fanehoan-kevitra tsy manintona. Na izany aza, aza mitsambikina amin'ny famaranana. Raha toa ka misy ny mpampiasa anao (Snapchat, Stories Instagram), dia tokony ho toy izany koa ianao.
Ny votoatin-kevitra momba ny ephemera dia ny mamorona sy mamorona fotoana fohy. Midika izany fa tsy ilaina ny mandany fotoana handrafetana horonantsary arifomba amin'ny studio. Mifantoha amin'ny famoronana votoaty haingana sy malemy izay maneho ny toetra maha-marika anao. Ireo manam-pahaizana momba ny Semalta dia manoro hevitra ny hanombohanao ny gifs ambadika, ny fampisehoana an-tariby, na ny fanisàna hetsika manokana.
Andao hiatrika izany: amin'izao andro izao, ny lazan'ny vokatra momba ny vokatra dia mitombo. Araka ny fikarohana nataon'ny eMarketer, tamin'ny 2016 ny marika dia nandany manodidina ny 570 tapitrisa dolara tamin'ny famoahana mpivarotra ao amin'ny Instagram. Manontany tena hoe inona ny resaka rehetra? Tantara lava fohy: dia izao tontolo izao momba ny varotra marketing, izay heverina ho endrika tsara indrindra fampiroboroboana ao amin'ny tranokala.
Tadidio: ny olona dia mety matoky kokoa ny hevitry ny olona na ny heviny. Na dia tsy tena mpinamana amin'ireo olona manaraka azy aza ireo mpanentana, dia misy fiantraikany mitovy amin'izany. Ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny fitarihana marina dia mety hahasoa ny marika raha toa ka te hiditra amin'ny mpihaino vaovao ianao.
Aza mitady hanaraka ireo olo-malaza toy ny influencers. Ny zava-misy dia ny fandoavana ny vola miditra aminy. Tsara kokoa raha mahita gripa-nify misy tombontsoa mitovy amin'ny anao ianao. Tsy vitan'ny hoe sarotra kokoa ny miara-miasa aminy, fa izy ireo ihany koa no karazana mpijery izay manana olona liana amin'ny marikao.
Manantena anao fa nahafinaritra ity lahatsoratra ity. Manana hevitra hafa fampiroboroboana ao amin'ny tranonkala ve ianao? Zarao amin'izy ireo izahay!